Shiinaha FOTON C6 EVFOTON C6 EV warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Baska magaalada ee Foton C6 EV wuxuu xambaarsan yahay fikrad basas yar-yar oo “micro-circulation” ah taas oo jareysa tirooyinka wanaagsan ee jidadka magaalooyinka ee udhaxeeya xaafadaha magaalada ama xaafadaha, xalinta dhibaatada gaadiidka ee dadka reer magaalka ah "maylkii ugu dambeeyay", iyagoo ogaanaya isku xirnaashaha tareenka iyo bulshada, wadada halbowlaha ah iyo bulshada.
Guud ahaan Cabbirka 6530 * 2230 * 2800
Gawaarida Gawaarida 3900
Culayska Curb 5.9 / 6.2T
Awoodda Rakaabka / Fadhiga 36 / 11-17
Albaabka Rakaabka Hal albaab oo ka baxa
Baska magaalada Foton C6 EV wuxuu xambaarsan yahay fikrad basas yar-yar oo “micro-circulation” ah taasoo jaraysa tirooyinka wanaagsan ee jidadka magaalooyinka ee udhaxeeya xaafadaha magaalada ama xaafadaha, taasoo xalinaysa dhibaatada gaadiid ee dadka magaalooyinka dagan maylkii ugu dambeeyay. Iyada oo leh naqshad cusub iyo naqshad gaar ah, waxay ka muuqataa fudeyd iyo isku xirnaan, taasoo horseedeysa moodada baska "micro-circulatory".
Nalka hore ee hore
Baska magaalada ee Foton C6 EV wuxuu xambaarsan yahay fikrad basas yar-yar oo “micro-circulation” ah taas oo jareysa tirooyinka wanaagsan ee jidadka magaalooyinka ee udhaxeeya xaafadaha magaalada ama xaafadaha, xalinta dhibaatada gaadiidka ee dadka reer magaalka ah "maylkii ugu dambeeyay", iyagoo ogaanaya isku xirnaashaha tareenka iyo bulshada, wadada halbowlaha ah iyo bulshada. Iyada oo leh naqshad cusub iyo naqshad gaar ah, waxay ka muuqataa fudeyd iyo isku xirnaan, taasoo horseedeysa moodada baska "micro-circulatory".
Ku qalabaysan nidaam koontaroolida baabuurta madax-bannaan oo horumarsan, oo leh hawlgal ganacsi oo sannado badan socday.
oo leh wakhti lacag bixin ah 12 illaa 15 daqiiqadood markasta, masaafada wadista ee lacag kastaana ay gaadhayso in ka badan 150km, taas oo keydineysa shidaalka ilaa 80,000 RMB sannad kasta.
Foton wuxuu ka caawiyaa hawl wadeenada inay sameeyaan qorshaha hawlgalka ugu fiican iyadoo loo marayo qaababka falanqaynta wareegga hawlgalka Gaadiidka iyo falanqaynta kheyraadka dhismaha Kaabayaasha, oo ay ku jiraan sababaha faahfaahsan ee soo socda: qaabka baska, qaabka lacag bixinta, qiimaha halkii cutub, masaafada / maalinta, iwm.
Foton waxay siisaa hawlwadeenada qorshaynta laynka la hagaajiyay iyadoo la tixraacayo hababka hawlgalka baabuurta, sida magaalada dhexdhexaadka yar yar.
Iyadoo loo marayo hawlgalka bandhigga gawaarida, tababarka shaqaalaha, hagida hawlgalka kooxda, Foton waxay ujeedadeedu tahay inay u soo bandhigto talooyin iyo xalal gaar ah hawl wadeennada. Tilmaanta hawlgalka kooxda: Jooji qorshaha dhismaha saldhigga, Tababbarka maaraynta ciidanka, oo ay ku jiraan dayactirka xilliyada baabuurta; Maareynta isticmaalka tamarta; Tababbarka jadwalka gawaarida, sida soo noqnoqoshada bixitaanka; qorshooyinka isbeddelka wareejinta & jadwalka gawaarida fog. Hawlgalka Bandhigga: Falanqaynta Dalabyada Hawl-wadeennada; Qorshaynta xalka alaabooyinka; Hawl Muunad & mudaharaad; La socodka xogta & falanqaynta; Xalalka ugu dambeeya ee la hagaajiyay. Tababarka shaqaalaha: NEV tababarka aqoonta aasaasiga ah; Dayactirka iyo dayactirka & cilad bixinta tababarka; Tababar wadista tababarka.